China Simple Solid Wood High and Low Side Cabinet Cabinet IKhabhinethi # 0024 Ukwenziwa kunye neFektri | Yamazonhome
I-Simple Solid Wood ePhakamileyo kunye neZantsi eKhabhinethi yeKhabhinethi yokuGcina # 0024
Igama: iikhabhathi zegumbi lokuhlala
Inombolo yomzekelo: Amac-0024
Ubungakanani: Uhlobo A: 400 × 450 × 800mm
Isakhelo esiphambili yi-oki ekumgangatho ophezulu
Ayizizo zonke iinkuni ezibizwa ngokuba yi-oki emhlophe. "Iiorenji ezizalelwe eHuainan ziorenji, ngelixa ezo zazalelwa eHuaibei ziorenji." Nangona umthi wom-oki ungowosapho olunye kunye nom-oki omhlophe, ngenxa yokuthintelwa kwemozulu kunye nokusingqongileyo kwindawo ekhula kuyo, iinkozo zayo zomthi zimxinwa, imigca emnyama, kunye nomkhwa. Xa ukhetha ifanitshala ye-oki eyiyo, eyona nto ifanelekileyo kufuneka ibe yi-oki emhlophe, kwaye ifanitshala esiyenzayo yenziwe nge-oki emhlophe ekumgangatho ophezulu engeniswe ngaphandle kwesikhumba esenziwe ngumntu.
Indawo evaliweyo yedrowa
Indawo evaliweyo yedrowa ikunceda ukuba uyihlele kwaye uyigcine, ngelixa ikhusela ubumfihlo bakho. Uyilo lwe-groove yesiphatho sedrowa kukunika uluvo olongezelelekileyo lokhuseleko. Ngaphakathi igudile kwaye ithe tyaba, kwaye ayinakukrwitshwa nokuba ubeke impahla ethambileyo kuyo.
Iikona ezijikeleziweyo ezinesakhiwo se-tenon kunye ne-tenon
Uyilo luthathe inkuthazo kwifenitshala yaseKorea kwaye wadibanisa iimpawu zefanitshala yaseTshayina ukuphuhlisa ifanitshala yaseNordic. Imigca elula nebuthathaka, iipateni ezintle ze-oki, zaphula ubumdaka, kwaye akukho kunqongophala kobuhle ngokulula. Isakhiwo sendabuko se-tenon-and-mortise sikubuyisela kwilizwe lokwenyani kunye nendalo.
Umthi oqinileyo uthambise imilenze yekhabhinethi
Imilenze yekhabhathi ejijekileyo eqinileyo yomthi yenzelwe ukuba ithambeke ngokukuko ngokweempawu zomthwalo wekhabhinethi, eyonyusa umthamo wokuthwala. I-oki emhlophe evela e-United States ineepateni ezintle ngakumbi, ukuthungwa okutyebileyo, umahluko omncinci wombala, kwaye umbala ogqityiweyo weenkuni uyindalo kwaye umsulwa. Akukho mihombiso mininzi kunye nezithintelo, iinkuni ezomeleleyo ezisulungekileyo zisasetyenziswa kwimathiriyeli, kwaye imihombiso enjengee-arcs ezikroliweyo iyancitshiswa kuyilo. Imigca elula itolika ubuhle bokulula.
Iidrowa zenziwe ngezilayidi zomthi eziqinileyo
Ngaphakathi kwidrowa yamkela isikhokelo sikaloliwe somthi, ekungekho lula ukonakaliswa, kwaye okukhona sisetyenziswa, kokukhona kugudile. Ukutsala akunamsebenzi kwaye akuvelisi ngxolo.
Isitayile seNordic esomeleleyo sekhabhathi yewayini
Isitayile seNordic esomeleleyo sekhabhathi yewayini, ukubonisa ukugcinwa, zombini ixabiso lokuhombisa kunye nomsebenzi wokugcina. Zimbini iisayizi onokuzikhetha. Ibhodi enkulu ithe tye kwaye izixhobo ezisetyenzisiweyo ziyinyani. Ukutshiza ngokuvulekileyo kugcina ukuthungwa kwe-oki ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu, kwaye unokuziva ukuthungwa komculo ngesandla.
Egqithileyo I-Sup Surfboard ibhrashi yokuma kwiPaddle Board 0370
Okulandelayo: Umgangatho ophakamileyo webhodi yokubhabha eshinyeneyo ekhatywayo ye-SUP kwibhodi ye-paddle 0371
IKhabhinethi yokuGcina igumbi lokuhlambela
Ikhabhinethi yoGcino lweKona
IKhabhinethi yePaneli yokuGcina iKhabhinethi
IKhabhinethi yoGcino lwaNgaphandle
Ukugcina iKhabhinethi yokuGcina
Ukugcina iKhabhinethi ukuba ingangeni manzi
IKhabhinethi yoLondolozo lweeNkonzo
Iikhabhathi Zokugcina Umthi
Omnye Door Four Ityesi Side iKhabhinethi Simple Sofa S ...
Ikhaya eliSwiti lamaNqanaba ama-2 eziModyuli eziMnyama eziHleliweyo ...